Meniscus patella: zokulimala, ukwelashwa
patella Menisci - a uqwanga inhlendla emise, okuyinto zitholakala ezinhlangothini joint kwedolo. imisebenzi yabo eziyinhloko:
nenkanuko edlulele we ngokuhlanganyela amadolo nokuvimbela ukuhamba kwalo ngokweqile;
nokwehlisa ukushaqeka imithwalo olutholwa uqwanga ukumboza evele ahlangene amathambo, avimbele bafake kwanoma uqwanga;
ekuvimbeleni ngomshikisho amathambo kwedolo.
Nokho, meniscus ukulimala - into ezijwayelekile, kuba yimbangela ejwayelekile ye flexion abukhali futhi ezijulile kwedolo. Ngokuvamile lokho kulimala abasubathi yizikhukhula. Kunezinhlobo eziningana umonakalo meniscus.
Meniscus patella: zokulimala
Ubuhlungu, futhi eqinisweni - kuba isikhashana esinqunyiwe izinyembezi we meniscus. Uhlobo oluvame kakhulu lokulimala kwedolo isici ngokuhlanganyela, lokulandisa 50% azo zonke amacala ukuhlukumezeka. Kancane overwrought, meniscus njengoba elalibambeke phakathi cartilages.
Qedela ngokuhlukana we meniscus - into ezingavamile, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi umonakalo ezinzima kakhulu. Ngenxa yalokho we patella ukulimala meniscus kungenzeka ngokugcwele noma ingxenye uhlukane ngokuhlanganyela, njengokungathi "uyahlanganyela" ngaphakathi egobolondweni lelunga. Ukwelashwa lezi ukulimala kudingeka uhlinzwe saziso.
meniscus Ngokushesha babancwebe uqwanga ngokuhlanganyela (40%).
Ubuhlungu, ukuvuvukala, ukuqina ngokuhlanganyela - zonke lezi zimpawu zivamile nezinye ukulimala abaningi, ukuze udokotela kuphela ungakwazi thembeke uqinisekise ukuthi isisulu lilimele meniscus patella.
Indlela aphathe ukulimala meniscus?
Into yokuqala i wamathambo kwenza palpation isayithi ubuhlungu nithole sezingeni ukulimala, kungase kudingeke i-MRI. Isu ukwelashwa kuxhomeke kakhulu uhlobo ukulimala, kodwa namanje zikhona eziningana izindlela ezivamile ukuthi odokotela zisebenzisa ukubuyisela patella meniscus. Ukwelashwa ngokuvamile eside, ngokuvamile kudinga isixazululo olukhulu. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Wawuyini umgomo wazo wokuqala ukukhululwa wezifo zamathambo ka meniscus uqwanga phusha ke. ukuhlukumezeka abanolwazi, Udokotela Weqolo noma wezinyawo uzokwazi for 2-4 amaseshini ukuqeda wenza umcimbi bese ubuyisela esimweni ukuhamba ngokuhlanganyela. Lapho, ngenxa yezizathu ezithile, angeke qondanisa onekhono meniscus nesineke inikezwa hardware traction (isandiso) we ngokuhlanganyela. Uma meniscus iba endaweni (kodwa hhayi ngaphambili) wabelwa Physiotherapy nokwelashwa ultrasonic kanye nokuzivocavoca yokwelapha. Uma impatho olandelanayo engalethi elamukelekile, noma meniscus akulula phusha noma ezambiwa iqhume ke isinqumo senziwe yokususa ngokugcwele noma kancane we meniscus.
Meniscus patella: ekwelapheni amakhambi abantu
Ukuze asize abazalwane nokuvulwa meniscus nonekhono Folk imithi. Okulandelayo izindlela kungase kutholakale kahle.
Daily angu-2 amaphakethe of Bile wezokwelapha.
Lezo zifundo zezinyanga ezimbili ukwelashwa uju, utshwala licindezele (nsuku zonke at 2:00).
ukulibopha Lopukhovs (nsuku zonke 8 amahora ukuqedela ukunyamalala izimpawu isifo).
Khumbula ukuthi imishanguzo ekhaya kungenzeka kuphela esimweni lapho ukulimala ayiyona inkimbinkimbi yi displacement we meniscus.
Lupus - isifo okukhulu okuqhubekayo
Indlala yegilo - wukuthi emzimbeni? Umsebenzi futhi yegilo isifo
Imijovo yokugoma ngokumelene rubella: inzuzo noma ilimaze
Izimpawu unhlangothi kwabesifazane futhi amadoda
Annabet Cheyz: Izithuthi
Brunner macrophylla - yesondlo nokunakekela
Ubani uwine i-TV noma i-computer?
Indlela ukukhetha ngesitimu?
Udweba kanjani kulamula: iseluleko elula igxathu negxathu isenzo
I-elk enhle futhi ewusizo ku-multivark
Kuthiwani uma lag kukhompyutha: Amathiphu Simple